सप्तकोशीमा पानीको बहाव बढ्यो, खतराको संकेत स्वरुप रातो बत्ती बालियाे - Nepal Insider
काठमाण्डौबाट ८०० सिसिका ट्याक्सी हटाइदै, नयाँ ट्याक्सीको लागि दर्ता खुल्दै
झडपमा ज:लेर घाइते असई कल्पना खड्काको बढुवा
नेपालीले भारतको बिरोध गरिरहेकै बेला चीनले भन्यो : “नेपालको मात्र होइन चिनको पनि भुमि मिच्यो भारतले”
जनतालाई मार पर्ने गरि पियाजको भाउ महँगो भएपछि, बंगलादेशकी प्रधानमन्त्रीले खान छाडिन् प्याज
को हुन रमेश प्रसाईको भाइरल चित्र बनाउने ब्यक्ति पूरा विबरण (तस्बिर सहित)
संसारको सबैभन्दा मंहगाे तरकारीको मूल्य प्रति केजी १ लाख ३० हजार
अन्ततः नेपाली से नाले कालापानी र लिपुलेक आफ्नो क ब्जामा लिँदै, प्रधानमन्त्री ओलीको समेत आयो यस्तो नि र्देश न (भिडियो)
अभिनेता विपिन कार्कीलाई पूत्रीलाभ…
Home/समाचार/सप्तकोशीमा पानीको बहाव बढ्यो, खतराको संकेत स्वरुप रातो बत्ती बालियाे
सप्तकोशीमा पानीको बहाव बढ्यो, खतराको संकेत स्वरुप रातो बत्ती बालियाे
सुन्सरीको सप्तकोशी नदीमा पानीको बहाव उच्च भएपछी खतराको संकेत स्वरुप रातो बत्ती बालिएको छ । विगत ४ दिनदेखि परेको अविरल वर्षाले नदीमा पानीको बहाव बढेको हो ।
कोशीव्यारेज कनट्रोल रुमले सप्तकोशीमा शुक्रबार बिहान ७ बजे पानीको बहाव प्रतिसेकण्ड १ लाख ६५ हजार ७२० क्युसेक पुगेको जनाएको छ जुन बहाव अघिल्ला दिनको तुलनामा बढी हो ।
हरेक घण्टैपिच्छे पानीको बहाव बढेसँगै ५६ वटा ढोकामध्ये २२ वटा ढोका खुल्ला गरिएको छ ।
मेक्सम खाती र मेलिना राईको स्वरमा ‘तिम्रो रुपैको जादु’ …भिडियो सहित
भद्रगोलका सिते बा रियलमा यस्ता छन् ! हिरोईन भन्दा राम्री श्रीमती, करोडौंको मालिक (भिडियो हेर्नुस)
देख्दा दुनियाँकै मुटु चिरिने पूर्वी पहाडको यो कष्ट राज्यका निकायले कहिले देख्ला ? [२१ तस्वीर]
विदेशी भूमिमा यसरि च्यातियो अञ्जलीको पछ्यौरी (भिडियो)